Iingoma kuSan Judas Tadeo ▷ ➡️ Discover Online Online ➡️
Kule nqaku sichaza eyona nto iphambili iingoma ku Ongcwele uJude Thaddeus, Ezi ndibano zibhaliweyo zibhalwe ngabantu abazinikeleyo kule ngcwele ingummangaliso. Ngendlela yombulelo kwaye ngeenjongo zokubonisa ukuzinikela kwabo kunye noThando kuSan Judas Tadeo le mithandazo ihamba nomculo; Baye baba siko xa kufikwa ekuthandazeni ku-Saint Jude Thaddeus.
1 Iingoma ezimnandi kuSan Judas Tadeo
1.1 Ingoma yozuko ku-Saint Jude Thaddeus
2 Ukuzinikela ku-Saint Jude
3 Isiko kunye neengoma kuSan Judas Tadeo
4 Isaziso kunye neleta Canto iSan Judas Tadeo
5 Umthandazo weSikhalazo ku-Saint Jude Thaddeus
6 Umthandazo womtshato uthandwa ngu-Saint Jude Thaddeus
Iingoma ezimnandi kuSan Judas Tadeo
Ngokuphathelele iingoma ezaziwa kakhulu kuSan Judas Tadeo, siza kufumana iingoma zakhe zokuqala, ezinye zazo zicaciswe ngamazwi kunye nomculo ngabalandeli bakhe abathembekileyo.
Ingoma yozuko ku-Saint Jude Thaddeus
Ungazityesheli izicelo, Zabantu ababephambi kwakho
Umpostile kaYesu; Ukuhlonela Umfeli-nkolo Ongcwele
Ukucela ukuba uthethelele, phambi kokuba uThixo eze ezinyaweni zakho
Umzala woMsindisi, oye washumayela ngaye kuthi
Owu mkhuseli ozukileyo, Kumatyala anzima;
Ubhale ileta engcwele evutha ngathi lidangatye
Kwabaninzi abatyhafileyo, abafumana intuthuzelo kuwe
Kwaye egameni likaYesu, imimangaliso yewaka lomsebenzi
Owu mkhuseli ozukileyo, oh ingcwele yozuko judas
U-Saint Jude olityelweyo, ukusukela namhlanje uya kukhunjulwa
Yonke imihla xa uthandaza, usisondeza enkosini
Siyakuphakamisa ngobuqaqawuli, kuba siyakhala kuwe
Nceda onqwenela, obona into elahlekileyo
Kwaye ngamana intliziyo eNgcwele ingakuzisa kubomi obutsha
Ukujonga kwakho oh san judas, kunika ukuzola kunye noxolo
Kubalandeli bakho abathembekileyo, ukuba ngomhla wakho, namhlanje bayabiza
Mkhuseli ozukileyo, siyabulela kuwe namhlanje
Owu uYudas oNgcwele ozukileyo, sisikelele namhlanje nanamhlanje
Umkhuseli ozukileyo, oh oyingcwele judas ozukileyo
Ukuzinikela ku-Saint Jude
Ukuzinikela kwisanta kuthathelwa ingqalelo yicawa, kuba, kwiBhunga lesiBini leVatican, kwaxelwa ukuba zonke izinto ezenziwa kwiNtombi Enyulu Engcwele kunye nakwiiNgcwele, zitsala abathembekileyo ekuxabiseni ngokungakumbi iSitragi esingcwele.
Kananjalo kwizifundo ezenziwa kwiitempile ezingcwele kwaboniswa ukuba: ICawe ibonakalisile nakwiikhalenda zayo, iintsuku ezinikezelwe kwimemori yabaFeli-nkolo nabaNgcwele. Aba kuphela kwabo baphakanyisiweyo, ngobabalo lukaThixo. Abafeli-nkolo nabaNgcwele abanosindiso lwanaphakade.
Bakwabonisa ukuba iingoma zeNkosi zibonakalisa ukuzinikela: Icawe ibonisa ukuba abaFeli-nkolo kunye nabaNgcwele bacula indumiso egqibeleleyo kuThixo ezulwini kwaye basithandazela. Babhiyozela ukudlula kwaba Bangcwele emhlabeni nasezulwini, iBandla livakalisa imfihlelo yePasika, njengoko iphunyelelwe ngabaNgcwele abaye babandezeleka kwaye bazukiswa nguYesu Krestu. Icawa ibabeka kubo abathembekileyo njengemizekelo efanelekileyo, ukuba balingiswe ngokuthembeka kwabo, banike yonke into kuYise ngoKristu, kwaye ngokulunga kwabo bacela inceba kaThixo.
Isiko kunye neengoma kuSan Judas Tadeo
Ngexesha lomntu abaNgcwele babehlonitshwa ngokwesiko eBandleni. Ootata beBhunga lesiBini leVatican baphinde la masiko njengoko kunokugcinwa:
Abangcwele ngokwesiko bahlonitshwa eCaweni nakwizinto zabo eziyinyani kunye nemifanekiso ebhiyozelwa kunqulo. Imisitho yabaNgcwele ibhengeza imisebenzi emangalisayo kaKristu kunye nabakhonzi baKhe, kwaye babonise imizekelo ethembekileyo ethembekileyo yokuxelisa. Umgaqo-siseko kwiLiturgy eNgcwele.
Kukho ezinye iingoma ezithandwayo ku-San Judas, ezazenziwe ngombulelo ngenxa yeenzuzo eziceliweyo kunye nokunikwa, okanye ngemimangaliso eyenziweyo kubazinikeleyo abathembekileyo, apha sishiya isampulu yenye yazo, kubandakanya umculo notation kunye namazwi. Kwelinye icala, siyakumema ukuba wazi imixholo yokushumayela, onokuyisebenzisa nanini na.
Isaziso kunye neleta Canto iSan Judas Tadeo
Intshayelelo: D, D7
Owu! U-Yuda oNgcwele ozukileyo, uMpostile weNkosi,
Umthandazo weSikhalazo ku-Saint Jude Thaddeus
Owu Yuda oZukileyo, mkhonzi othembekileyo nomhlobo kaYesu, igama longendawo sesona sizathu sokuba ushiywe ecaleni, kodwa iBandla liyakuhlonipha kwaye liyakuqonda kwihlabathi liphela njengoMxhasi wamatyala abalulekileyo. Ndithandazeleni, nina ninqwenela inceba kaThixo, nangoncedo lwenu olunamandla, nindifumane uncedo olukhawulezileyo nolubonakalayo kwiimfuno zam.
Ndincede kwaye undikhathalele ukuze ndikufanelekele ukufumana intuthuzelo kunye nokukhuselwa kwezulu kuko konke ukubandezeleka kwam neembandezelo, ngakumbi ... (isicelo senziwe apha) kwaye ndinokudumisa ndimdumise uThixo kunye nawe kunye bonke abangcwele ngonaphakade kanaphakade.
Oyisikelelekileyo uYuda oNgcwele ndithembisa ukubulela ngolamlo lwakho, kwaye ndikuhloniphe ngokuzinikela.
Owu Yuda oNgcwele sijonge kwaye nabo bonke abo bakuxabisayo bacele ukukhuselwa kwakho. Bayibenjalo.
Umthandazo womtshato uthandwa ngu-Saint Jude Thaddeus
U-Yude oNgcwele osikelelweyo, umanyano lwethu namhlanje luneengxaki. Imidiya endaweni yethu phambi koThixo uSomandla evula imiphefumlo yethu ukuze sazane omnye nomnye ngendlela yokwenyani. Sincede sikhule yonke imihla kulwazi lwethu nasekuthandaneni kwaye sonyuse amandla ethu okuthanda nokuthandwa.
Sincede, uYuda oNgcwele ozukileyo, ukuba sazi kwaye sincothule onke amazwi okuziqhenya kunye nomdla ophosakeleyo, ngokuchasene nothando lokwenene kunye nokuqola kwenene. Ke ngoko, ukuqala ukuthanda kwaye sigcwele uthando, siya kuba nakho ukonwabela omnye nomnye ngeentsuku ezisaseleyo kubomi bethu bomtshato.